'68 Elvis Comeback Special Christmas
I-'68 Elvis Comeback Special
Akukho mfihlo yokuba u-Elvis Presley wayengakhange asebenze ngokufanelekileyo ngamacandelo omphathi wakhe, uColonel Tom Parker. Kwakukho ngo-1968, nangona kunjalo, ukuba u-Elvis waqhawula kwi-spell yakhe, ukuba nje ngethuba elifutshane, echasayo umbono kaParker weminyaka emdala yabantu baka-Elvis kwaye, kwinkqubo, ubuninzi bomculo wezandla zobunjineli obuhle kakhulu (kunye nokwanelisayo) buya kubuya.
I-NBC kunye nenkxaso yoMculi (wemishini yokuthunga) sele ifuna ukubonisa i-Elvis uKhisimusi ekhethekileyo, kwaye uKumkani wayengenayo ingxaki yokuhambisa ezinye zeXmas zakhe ezinkulu, ikakhulukazi "i-Christmas Christmas". Ngoxhaswa ngumlawuli uSteve Binder, nangona kunjalo, u-Presley waqala ukucinga ngethuba elilodwa leTV elikhethekileyo njengendlela yokubuyisela indawo yakhe efanelekileyo kwiitrone zomculo wep pop, enye ebeyidlala emva kokubuya kwakhe kwi-Army ngo-1960.
Iminyaka yamabhayisikobho ahlaselayo, ama-soundtracks, kunye nenkqubela eqhubekayo yomculo othandwayo eshiye uElvis othulini, zombini ngobuchule kunye nentengiso.
Okukhethekileyo kwatshintshile konke okukhawuleza, ukuseka kwakhona uKumkani njengomculi ohlazileyo, ubukho bezesondo (loo mnyama emhlophe yesikhumba sele ibe yisimboli yonke yayo), umculi ngokugqwesileyo, kunye nomculi wangempela ukuqala. Olu gqibela lugxininiswe ngokukhethekileyo yiseshoni ye-jam yesithandana ekhethekileyo; abanye bayakholelwa ukuba ngumculo ogqwesileyo owake wakudla. Kuthathwe kunye neyona nto ekhethekileyo ejikelezile, ibonakala njengenye yezinto ezivakalayo zokuvuswa komsebenzi kwimbali yokuzonwabisa.
1968 Umhlahlandlela: Elvis '68 I-Special Reback
NgoJanuwari 12: I- NBC imemezela esidlangalaleni i-Elvis ezayo ekhethekileyo yeThisimusi yeThisimusi, apho iya kuhlawulwa i-$ 250,000. Ifilimu engaziwa ngegama njengenxalenye yepakethi ayiyi kuba nomculo we-850,000.
NgoMeyi 14: Kwintlanganiso yabucala kunye no-NBC olawulayo uBob Finkel, u-Elvis uthi uyafuna ukusebenzisa i-special special ezayo ukuze aphinde aphinde azenzele abaphulaphuli bakhe, esithi "Ndifuna ukuba wonke umntu azi into endiyenza ngokwenene ."
Ngo-Meyi 17: UStephen Binder uqeshwa njengomlawuli we-TV ekhethekileyo. Amakhredithi akhe afaka ingqungquthela ye-1964 yenkwenkwezi yokusasaza i -TAMI , i-revue yama-weekly Hullabaloo , kunye ne-Petula Clark ye- Petula ekhethekileyo ye-1968 ye-Petula Clark, eyayibonisa iClack emhlophe echukumisa ingalo yomnyama omnyama uHarry Belafonte, ekuqumbeni kweCrysler , umxhasi we-show.
NgoJuni 6: USen. Robert Kennedy, umzalwana kaJFK, uhlaselwa eLos Angeles. Ukudabuka kuka-Elvis ngenxa yokufa kunye nekaMartin Luther King kuthintela uSteve Binder kwimpembelelo aqala ngayo ukucinga ngokubhala "ingoma yoluntu" ingoma kaKumkani ukuba ingoma yakhe ekhethekileyo.
NgoJuni 11: UBill Belew ongumyili we-NBC ubonisa isambatho esimhlophe "somshumayeli" kunye ne-leather-tight tight leather suit Elvis izambatha ngokukhethekileyo. Ubonisa ukuba uElvis unxibe isambatho esidumile segolide esiqeshwe nguNodie Cohen kwaye sibone kwiphepha le-albhamu 50,000,000 i-Elvis Fans ayikwazi ukuba yinto engalunganga , kodwa uPexley, owaziyo ukuchitha umfanekiso wakhe waseHollywood, uyavuma kuphela kwijeyethi.
NgoJuni 17: U- Elvis uqala ukudansa, ukuthetha, kunye nencoko yokuxoxa ngokubhekiselele kwi-TV ekhethekileyo.
NgoJuni 19: Emva kokubukela u-Elvis kunye neqela lakhe elide ixesha elide lihlaziya emagumbini abo okugqoka kuyo yonke iveki, uSteve Binder unquma ukufaka ukungqubuzana okungaqhelekanga kwimiboniso yeTV. Ekuqaleni unquma ukwenza ifilimu igumbi lokugqoka lizicwangcisa ngokwabo, kwaye licinga ukuba lingcono kwaye ligqibe ukulibamba phambi kwabaphulaphuli, kwinqanaba elifanayo uPesley uya kusebenzisa "umboniso wokuzimela".
NgoJuni 20 : Kwi-Hollywood ye-Western Recorders, uElvis urekhoda iingoma "I-Nothingville," "Ziyeke," "Igumbi leGitare," kunye ne "Big Boss Man". Uya kusebenzisa oku kunye nokulandelwa kweentsuku ezimbalwa ezilandelayo njengesikhokelo sokusebenza kwakhe kwi-TV ekhethekileyo.
NgoJuni 21 : Kwi-Hollywood ye-Western Recorders, uElvis urekhoda iingoma "Ndibuhlungu," "IYiputa encinane," "Ingxaki," "Ngamanye amaxesha ndivakalelwa njengomntwana ongenamama," kwaye "Ndingaya Njani KuNdikhoyo?"
NgoJuni 21: Ubungqina bucela umlawuli womculo uBones Howe ukuba abhale ukuba "ingqalelo yoluntu" ingoma ye-Elvis 'enkulu inombolo yokuvala, ebeyicwangciselwe njengomgangatho othi "Ndiya kuhlala KwiKrisimesi." UHowe ubhala ingoma yokutshintsha, "Ukuba Ndiyakwazi Ukuphupha," ngaloo mini; emva kokuliva ixesha eliphindwe kabini, uElvis uyavuma ukuphela nayo.
NgoJuni 22 : U-Elvis urekhoda iingoma "Phezulu kweNtloko yam," "Ndiyifumene ukuKhanya," "Ugciniwe," kunye ne "Ingxaki / I-Guitar Man" eyoyivula ngokukhethekileyo.
NgoJuni 23 : U-Elvis ubhala iingxelo zakhe zokugqibela ezihamba phambili, "Ukuba Ndiyakwazi Ukuphupha" kunye "Nezikhumbuzo."
ESILANDELAYO: Umgca wexesha uqhubeka, u-singles, i-soundtracks, kunye nokunye
NgoJuni 27: Ngo-6 ntambama, u-Elvis kunye nebandla lakhe babamba iseshoni ye-jam yesingqungquthela kwisigaba seziko le-NBC sika-Studio 4, intsebenzo ezininzi zinokubheka okusemandleni akhe onke. Nangona kunjalo, uColonel, ongenelisekanga ngecandelo lobuboniso, uye wagcina onke amathikithi ekusebenzeni, ukuphoqa abasebenzi ukuba baqhube kwindawo yokudlela yaseBob's Big Boy (4211 W. Riverside uDkt, eBurbank) kwaye bacele ukuba abathandi bafike bafumane u-Elvis konsathi. (UKumkani ngokwakhe unentlonelo enkulu ekusebenzeni okokuqala ngqa kwiminyaka eyisixhenxe, kwaye uxelelwa nguBinder ukuba xa ephuma apho, unokuvuka nje aze ashiye ukuba akakwazi ukuyithatha. Ukusebenza kubonisa ukuba, kwangoko kwisigaba, wenza ukuzenza nje oko.) Iimbonakaliso ezimbini, umva nangobusuku, zenziwa. Le ntsebenzo yayiza kubakho ukukhuthazwa kwee-MTV's Unplugged series.
Iingoma ezenziwa kwi-"Sitdown Show" zilandelayo: "Kulungile, Mama," "Ihotele ye-Heartbreak," "Ndithande," "umntwana othanda ukuba ndiyenze," "Blue Suede Shoes," "uLawdy Miss U-Clawdy, "" Ngaba Ulobu busuku? " "Xa i-Blue Blue Moon ijika kwakhona kwiGold," "I-Santa Claus ibuyele eKapa," "iKrismesi yeBlue," "I-Tiger Man," "Ukuzama Ukufikelela Kuwe," "Ngobunye Ubusuku," kunye ne "Ukukhumbula."
NgoJuni 28: U- Elvis uthetha i-"medley medley" kwingxenye yomboniso kunye nombono othi "umngcele" ongenakuze usasaze: Abahloli be-NBC babengenaso izichaso, kodwa umxhasi, abaMculi bokuSewula iMishini, abazange bafune ukukhubaza ababukeli.
NgoJuni 29: U- Elvis wenza isingeniso sokubonisa kunye neeseti zomculo ezimbini zokuma, okwangaphambili phambi kwendlu ephakamileyo. Iingoma eziqhutywe zilandelayo: "I-Hotelbrebreak Hotel," "Inja Yenqatha," "Ngobunye Ubusuku," "Yonke Intshukumo," "Ayikwazi Ukuwa Ethandweni," "I-Jailhouse Rock," "Ungabi Nonya, "" I-Blue Suede Shoes, "" Uthande I-Tender, "isingeniso esithi" Inkathazo / iGitare ", kunye nokupasa kokuqala" Ukuba Ndiyakwazi Ukuphupha. "
NgoJuni 30: Isiphelo somboniso weTV, esithi "Ukuba Ndiyakwazi Ukuphupha," kufezekiswa nguPresley kwinqanaba elithathayo.
Ngo-Agasti 20: Emva kokubona ukutyunjwa okukrakra kwe-TV ekhethekileyo, uColonel uthukuthele, kwaye kwimemorandam yamaphepha amabini achaza izikhalazo ezininzi, ngokugqithiseleyo ukungabikho kweengoma zeKrismesi. Ukuba ubuncinane ingoma yeKrisimesi engabonakaliyo, isongela iParker, inethwekhi iya kunyanzelwa ukuba yenze iKrismesi ekhethekileyo kunye no-Elvis ukuhlonipha isivumelwano sayo. Ingxabano isonjululwa ngokukhawuleza xa inguqulelo ethi "iKrismesi yeBlue" evela kwi-"sit-down" ibonakaliswe kwakhona.
NgoDisemba 3: I-TV ekhethekileyo, isihloko sayo esisemthethweni nje ngu- Singer Unikezela i-Elvis , ama-debuts kwi-NBC ngo-9: 00 ngama-EST kwaye iyindawo enkulu yokuthengisa kunye ne-smash ebalulekileyo, ethatha iipesenti ezipheleleyo ezingama-42 zethelevishini yesizwe ebukela abaphulaphuli kunye nokumisa u-Elvis ' "lonke ixesha.
NgoDisemba 10: Ukuphucula impumelelo eyodwa, uColonel Tom Parker uxoxisana nokujongana nokusebenza kunye noWilliam Morris Agency: ezisibhozo zibonisa iveki eVasgas kwinyanga enye. Ixabiso: isiqingatha sezigidi zeedola.
Ukusasazwa kwangaphambili: Elvis '68 Special Special Return
Ukuvula: "Ingxaki" / "I-Guitar Man" (medley)
"Bantwana, Yintoni Ofuna Ndiyenze"
"I-Heartbreak Hotel" / "Inja yokulimala" / "Yonke Intshukumo" (medley)
"Akunakunceda Ukuwa Ngothando"
"Ngaba Unobungqina Obusuku?"
Inombolo yokuveliswa kweVangeli:
"Ngamanye amaxesha ndivakalelwa njengomntwana ongenamntwana" / "Ndiya kuphi na eNkosini?" / "Phezulu Phezulu kweNtloko yam" / "Ugcinwe" (medley)
"Bantwana, Yintoni Ofuna Ndiyenze" (ukuphindaphinda)
"IKrismesi yeBlue Christmas"
Inombolo yomveliso yeGitare:
"I-Nothingville" / "I-Guitar Man" / "Ziyeke" / "Umntu Omkhulu Omkhulu" / "Ndibuhlungu" / "IYiputa encinci" / "Ingxaki" / "Igitre Man" (medley)
"Ukuba Ndiyakwazi Ukuphupha"
Sitdown ubonisa # 1 (6 ntambama): Elvis '68 I-Special Returnback
"Xa I-Blue Moon Yami Yaguqula Igolide"
"Ukuzama Ukufikelela Kuwe"
"Ubusuku Bunye" (kwakhona)
I-Sitdown ibonisa # 2 (8 ntambama): Elvis '68 I-Special Reback
"USanta Claus Ubuyela Kwidolophu"
Ama-Singles asemthethweni: Elvis '68 Special Reback
NgoNovemba 5, 1968: "Ukuba Ndiyakwazi Ukulolonga" b / w "Umda Wokwenyani" (uRCA Victor 47-9670)
NgoFebruwari 25, 1969: "Ukukhumbula" b / w "Charro" (uRCA Victor 47-9731)
I-Soundtrack Album: Elvis '68 I-Special Reback
NgoNovemba 22, 1968:
"Ingxaki / iGitare"
"Ingane Into Ofuna Ndiyenze"
"I-Medley: I-Heartbreak Hotel / Intlanzi Inja / Yonke Intshukunyuka" "Ayikwazi Kunceda Ukuwa Ethandweni" "IJailhouse Rock" "Ndithande Ithenda"
"Medley: Ndiya kuphi na eNkosini?
/ Phezulu Phezulu kwintloko yam / Isindiswe "
"I-Medley: Umntu Omkhulu Omntu / iGitarir Man / IYiputa elincinci / Inkxalabo / iGitare"
Indima kaRhulumente wase-US ekutyeni abafazi beMbala
Ukudibanisa i-Xenarthrans - Armadillos, Sloths, kunye nee-Anteaters
Imithandazo yamaKatolika yeNyanga kaMatshi
Amazwe ase-Afrika acingelwa ukuba awazange ahlanganiswe
Indlela Yokujongana Nenqununu Yengxaki